ကြည်လင်သောရေ (မျိုးငြိမ်းဆွေ) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:28 PM | No မှတ်ချက် | November 30, 2014 at 8:09pm
ငါ့အတွက်ဆောင်းဟာ တကယ်ရောက်လာပြီပေါ့၊အိပ်မက်ကတစ်ညလုံးနီးပါး ထင်တယ်၊ အစပိုင်းတော့ ခပ်ဝါးဝါးရယ်၊ ဘယ်သူ့မှန်းတော့ မသိဘူး အိုင်းချင်းကဗျာတွေရွတ်ပြနေတယ်။နောက်တော့စက်ဘီးတွေစီးနေတာ၊ ကသာရထားတွဲတစ်တွဲ မီးလောင်နေတာ။ အို... စုံလို့ပါပဲ ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ ရှည်လျားစွာမက်နေတာတစ်ခုကမိုးလင်းအထိပဲ၊ ဘယ်သူများလဲလို့ မစံ ခင်ဗျားရယ်၊ ကျွန်တော့် အိပ်မက်ထဲကို တိတ်တိတ်လေး ဝင်လာခဲ့တယ်
တွန်းချလိုက်လို့ မောဟိုက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် အိပ်ရာကနိုးတော့ ကျွန်တော်မောဟိုက်သွားတာအမှန်ပဲ၊အိပ်မက်နိမိတ်ကျမ်းလည်းဖတ်စရာမလိုပါဘူး၊မောင်ရင်မောင်မမယ်မ
ဝတ္ထုထဲက အိပ်မက်ခန်းလိုလည်း အတိတ်ကောက်စရာမလိုပါဘူး၊
လာဗျာ။ ခင်ဗျားလာမှ လာပါမလားလို့ပူနေတာ။ ဒါပြီးရင်ခင်ဗျား အချိန်ဗျ' လို့စိုးရိမ်သံနဲ့ပြောနေတဲ့ မောင်စိုးကို 'လာမှာပါကွာ''မင်းကလည်း
အတန်းရှေ့က ခုံမြင့်ပေါ် ရောက်သွားရင်ပဲ 'ဟောဒီဆရာလေးက မြန်မာစာနဲ့ဘွဲ့ရပြီးသား၊ မင်းတို့ကို စာစီစာကုံးနဲ့စကားပြေသင်လိမ့်မယ်။
ဆရာပေါက်စထောင်ခြောက်လ'လို့ အသံသေးသေးလေးနဲ့ လှမ်းအော်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့်
ဟိုးနောက်ဆုံးကို ဝေ့ ကြည့်လိုက်တယ်၊ အော်လိုက်တဲ့သူကိုမတွေ့ပါဘူး၊ ကျောင်းစာရေးစာပွဲမှာထိုင်နေတဲ့ မစံရဲ့ မယုံသင်္ကာမျက်လုံးတစ်စုံကိုတော့ ဖျတ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရရဲ့၊ စာတစ်ချိန်သင်ပြီးလို့
ဘာမျှခံစားချက်မရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ မစံ ခေါင်းပြန်ငုံ့သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်၊ ဒါဟာဘီအေဘွဲ့ ရအချိန်စားကျူရှင်ဆရာ
စကားပြောဖို့ ဘာသာတူတွေဖြစ်တော့လည်း အချိန်တိုတိုလေးမှာ ရင်းနှီးကြပြန်ရောပေါ့၊ မစံက 'အချစ်ဆုံးရယ် ဝမ်းနည်းခြင်းကိုညွှန်
ဆိုက်ပရပ်စ်ပင်တွေ မစိုက်ပါနဲ့' ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ်။ ညနဲ့ ကျွမ်းဝင်သူဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ်။ ရှင်ငြိမ်းမယ် အိုင်ချင်းတွေကို
အိုင်ချင်းကဗျာတွေကို အလွတ်ရွတ်ပြခံစားပြရင်တော့ မစံမျက်နှာလေးက အံ့သြနှစ်ခြိုက်တဲ့အမူအရာတွေနဲ့လင်းလက်လို့၊ ခင်ဗျား တကယ်
ချီးမွမ်းပြန်ပါရော၊ မစံနဲ့ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကကျယ်နေပြန်ပါပြီ၊ ကျွန်တော်စာသင်ချိန် တစ်ချိန်ပြီးတိုင်း
တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဘေးနားကပါ ပါလာတတ်တဲ့ မောင်စိုးတို့ ကြည်နိုင်တို့လည်း ကြာတော့ သူတို့မသိတဲ့ အကြောင်း
ကျွမ်းထိုးကောင်လို ကြုံရတဲ့ ရှင်ငြိမ်းမယ်ကဗျာလေးမှာ နိမိတ်ပုံဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊ အိုင်ချင်းတွေအားလုံးနိမိတ်ပုံတွေပြည့်နှက်
ဒီလိုပဲနော် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့တကယ်ခံစားလို့ရတယ်၊ ကြည့်စမ်း You go I stay Two Atoms. တဲ့။ဟဲ... ဟဲ... ကျွန်တော်လည်း အဲဒီကဗျာလို
ရိုးရိုးသားသား ပြောပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဒိန်းခနဲဆောင့်သွားတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆိပ်ခံဗောတံတားကို ရွှေပြည်သာကူးတဲ့ ကူးတို့ရေယာဉ်
ဒုန်း ခနဲဝင်ဆောင့်တော့ လန့်ဖျပ်ပြီး မစံ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်လို့ ယောင်ယမ်းပြီး ခေါင်းကိုငုံ့လိုက်မိတယ်၊ နောက်ကျိနေတဲ့
ပိုးကောင်မည်းမည်းလေးတွေ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးလို့ ပေါ်လိုက်ငုပ်လိုက် ဖြစ်နေတာကို မြင်လိုက်ရတာက ကျွန်တော်ပါ၊ ဘာပဲပြောပြော
ဘာသာစကား(Language) ပိုပြီး အားသန်သူ၊ ပိုပြီးကျွမ်းကျင်သူ၊ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကျယ်နေတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ
သစ်ပင်တွေ၊ ကန်ရေပြင်တွေ၊ ကောင်းကင်တွေက ပျော်ရွှင်ကြည်လင်တောက်ပလို့ လန်းဆန်းပွင့်လင်းပုံကိုပြက္ခဒိန်မကြည့်နဲ့သီတင်းကျွတ်ပြီလို့ပြောနေကြပြီ၊ ညကျတော့ အင်းလျားကန်ပေါင်ပေါ်မှာကလေး၊လူကြီးတွေအားလုံး ကမီးရှူးမီးပန်းတွေ ဖောက်လို့
ရင်ခုန်မနေနဲ့ ဦးလို့ စဖွင့်ထားတဲ့ မစံရဲ့ စာက 'လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းက ခင်ဗျားကျွန်တော့်ကို လေးနက်လှပသော
့ကျမ်းပြီးရင်သွားရတော့မှာဖြစ်လို့ဘယ်သူနဲ့မှသံယောဇဉ်မတွယ်နှောင်ချင် ပေမယ့်ခင်ဗျားကိုတော့ ကျွန်တော့ရဲ့အလိုကို
မစံက 'ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့ လို့ ရေးထားပေမယ့် ကျွန်တော်
နားလည်တာကပြောင်းပြန်၊ အဲဒါ' ချစ်တဲ့ စကားပြောပါ' ပဲ။
မြန်မာအင်္ကျီ လေးဘာလေးဝတ်ကြည့်ပါဦး၊ မစံနဲ့ လိုက်မှာပါလို့ ပြောလိုက်မိပြီးနောက်နေ့ကျတော့ မစံအချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်တဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်
စာမေးပွဲစောင့်ရတယ်၊ လာကြို ပေးပါလို့ ပြောလို့ ကျောင်းပေါက်ဝ စောင့်နေတော့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေနောက်က မစံပေါ့။
ဖုံးလို့မရအောင် ပေါ်လွင်လို့၊ 'ကျွန်တော့်ကို အဖေက ကားနဲ့လာကြိမလို့ ဗျ၊ ခင်ဗျားနဲ့ ချိန်းထားလို့လာမကြိုနဲ့လို့ ပြောထားတာ။
ကြည့်လို့မဝတဲ့ ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေကို မစံမြင်တိုင်း 'ခင်ဗျား အဲလောက် မကြည့်နဲ့ဗျ မနေတတ်ဘူး'လို့ ပြောရင်း ရှက်နေတဲ့
တကယ်လှလို့လားလို့မစံ မေးပြန်တယ်၊ ခင်ဗျားဝတ်ခိုင်းလို့ ဝတ်လာတာဗျ လို့လည်း ပြောပြန်ရော၊ 'ဒီလိုဆိုတော့လည်း မစံက
ပြန်ပြောတယ်၊'ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်မှန်သွားပြီထင်တယ်''၊ဘာဖြစ်လို့လဲ' ၊'သြော်... ကျွန်တော့်တန်ဖိုးကို
ပြောပါဦး'' ပထမနှစ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစအရွယ်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့်အီဒဲလူက သာမန်သမီးရည်းစားတွေလိုရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်၊ ချိန်းတွေ့လိုက်နေချင်တာ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်မိန်းကလေးသိပ်မဆန်တာကိုလည်းအားမရဘူး၊ ကျွန်တော့်ဗီဇအတိုင်း ယောကျာ်းလေး၊ မိန်းကလေးသိပ်
ပြီးတော့ ဗေဒင်တွေဘာတွေ မယုံပေမယ့်လည်း အမေက ယုံတော့ကျွန်တော့်အတွက် ခဏခဏမေးတယ်၊ အဲဒီဟောစာတမ်းတွေ အပျင်းပြေဖတ်ကြည့်တိုင်းလည်း အချစ်ရေးတွင် ကံမကောင်း၊ ကိုယ်ကချစ်ရသူကို ရမည်မဟုတ်လို့ အမြဲပါတယ်၊ ကြာတော့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
ဖြစ်သည်တဲ့ဗျ။ ကျွန်တြော့်ဖင့် ခင်ဗျားမျက်နှာကြီး ဘွားခနဲပြေးမြင်မိတာပဲ၊
နောက်နေ့ကျတော့ခငဗျားကို ပြောမလို့ တောကြာ ခင်ဗျားက
တစ်မျိုးမြင်သွားမှာရယ်၊ ခင်ဗျား မြောက်ကားကြီး ဖြစ်နေမှာရယ်ကြောင့်မပြောတာ၊ မစံ စကားဆုံးတော့ ကျွန်တော်သတိလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနဲ့
'ခင်ဗျားမကောင်းဘူးဗျာ'လို့ တစ်ခွန်းပဲ ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် မှန်သလားတော့ မသိဘူး၊ မမှားဘူးဆိုတာတော့သေချာ
သလောက်နီးပါးပါပဲ။ ဒီလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်မထားခဲ့မိပါဘူး၊ဟန်ဆောင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့
ထင်ထားခဲ့တာ အဲဒီနေ့က ထပြန်ဖို့လွယ်ကူခဲ့တဲ့
မျက်ဝန်းတွေက ပြောလိုက်နဲ့ အားနည်းသူဘက်ကိုပါတတ်တဲ့ ကျွန်တော်က မစံကို အလိုကိုလိုက်ပြီးပိုပြီးဖြည့်ဆည်းကူညီ၊အဲဒါကိုပဲမစံက
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရူးသွပ်မှုနောက်က မစံက တရွတ်ဆွဲပါ၊ ဒါတွေဟာမှားသွားပြီဆိုတာတော့ နောက်မှသိရမှာပဲလေ၊ ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား
မူပျက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်နှာကို ဖတ်နိုင်သွားကြပြီ၊ ဖွင့်မမေးကြပေမယ့်လည်းသိနေကြပြီ၊ အလာစိပ်တဲ့ဖုန်းသံတွေ
အတူနေသူငယ်ချင်းတွေဟာ သူတော်စဉ်တော့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ခေတ်လူငယ်တွေ ဆိုပေမယ့်လည်း ပေါ့ပျက်ပျက်တွေ မဟုတ်သလို ကျွန်တော်ထက်လည်းလက်တွေ့ကျသူတွေပါ။ ပြီး တော့'သစ္စာ 'ဆိုတာ ကိုလည်း တိတိကျကျ နားလည်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်သူတွေပါ။သူတို့ဟာ
မဟုတ်ဘူး မစံ၊ သသေချာချာ ပြောကြတာ၊ မစံနဲ့ကျွန်တော့်ကို ဘဝအမှန်ထဲ ပြန်ခေါ်ကြတာ၊ မစံပေးတဲ့ စာထဲမှာ'ဖုနုးကိုင်ပြီးပြန်ချရတာ
ဒီမှာမရှိတော့ဘူး၊ ခင်ဗျားအတွက် စာတစ်စောင်ပေးထားတယ် ခဏစောင့် ကျွန်မသွားယူလိုက်ဦးမယ်'လို့ပြောရင်းပျာပျာ ပျာပျာနဲ့ထွက်သွားလေရဲ့။
ခပ်စိပ်စိပ်ကျလာတယ်၊ပိတောက်ပျိုတွေက ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားနေကြတယ်၊ 'ဒီမှာ ရော့ ကျွန်မ ကျူတီုရီရယ် စောင့်စရာရှိလို့သွားတော့မယ်။ နောက်မှတွေ့ရအောင်'ဆိုပြီး နီနီ ထွက်သွားတော့မှ မစံ အတန်းတက်ခဲ့ ဖူးတဲ့ တီ ၂၁၁ စာသင်ခန်းရဲ့ ရှေ့မှာ စာကိုဖွင့်ဖတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း
တစ်ခွန်းတည်းသော စကားက ခင်ဗျားကို ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ မြူမှုန်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို ပြက်ပြက်ထင်ထင်သိမြင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဆုပ်ကိုင်ထားရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို အရှက်ရဝမ်းနည်းမိပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နွေရဲ့အမြီးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့မိုးဟာ ဆောင်းရဲ့ဦးခေါင်းပါလားလို့ကျွန်တော်ပြန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ပူပြင်းတဲ့ရန်ကုန်နွေရဲ့အောက်မှာ တရားထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းခင်ဗျားဆီကဖုန်းကိုစောင့်နေမိတယ်၊
စ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတော့ စောင့်ဆိုင်းခြင်းကိုပဲ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ပွေ့ဖက်ရတာပေါ့၊ ခင်ဗျားဆီက ဘာမှမလာခဲ့ပါဘူး။
ပိတောက် ပင်ပျိုတွေပေါ်ကို မိုးစက်တွေက အငြိုးနဲ့ သည်းနေပါပြီ အဆောင်အောက်ကို ပြန်ဆင်းတော့ နှုံးချည့်သွားတဲ့ငါ့ခန္တာကိုယ်ရဲ့